Mail mivantana izay miasa! | Martech Zone
Mail mivantana izay miasa!
Talata, Janoary 9, 2007 Talata, Jona 9, 2015 Douglas Karr
Te-hanoratra momba an'io aho hatramin'ny alohan'ny Taom-baovao fa tsy maintsy namoaka ilay scanner 'ol aho mba hanangonana ireto sary mailaka mivantana voaraiko tato ho ato ireto. Ny fehiny dia izay sasany mail mivantana dia mandeha ihany. Ireto misy ohatra 3:
Jack Hayhow nandefa ny bokiny tamiko, Ny fahendren'ny kisoa manidina. Heveriko fa io no 'fanomezana' voalohany nataoko bilaogera! Manana boky roa eo amin'ny faran'ny alina aho izao mba hamaranana - saingy manantena ny handalina an'ity boky ity aho. Tena nilamina tokoa ny nahazo naoty nosoratan'i Jack niaraka tamin'ilay boky. Io Jack io dia nanokana fotoana hanoratana ahy sy handefasana ilay boky dia efa midika zavatra be dia be sahady!
CVS Nandefa karatra ho an'ny fialantsasatra ho ahy ny fivarotam-pankasitrahana noho ny fialofako. Ny mpiasa aza no nanao sonia azy manokana! Mahafinaritra ny CVS ahy. Mampahatsiahy ahy be dia be ny fivarotana an-joro fanaonay mitsidika ireo boonies any Newtown Connecticut (Nantsoina hoe Crossroads ilay magazay… navelan'izy ireo haka labiera ny ankizy ary handeha any an-trano any amin'ny ray aman-dreninay miaraka amin'ny antso an-tariby. … Lehilahy ve aho efa antitra!). Raha nanana voankazo ny CVS dia mety tsy handeha hiantsena mihitsy aho! Ny CVS dia manaporofo fa mety ho rojo goavambe ianao ary mbola mandray ny olona toa ny mpiara-monina aminao ihany.
Wikimedia nandefa karatra misy taratasy misy fisaorana ahy noho ny fanomezana nomeko Wikipedia taona lasa. Matetika aho maka ny volan'ny Paypal ary mamerina azy ireo amin'ireo mpamorona plugin sy tranokala mangataka fanomezana - raha toa ka ilaina ny rindrambaiko na serivisin'izy ireo. Mampiasa matetika an'i Wikipedia ato amin'ity bilaogy ity aho, ka ho faly ianao hahafantatra fa ny ampahany amin'ny vola azo amin'ny doka amin'ny tranokala dia navadika tamin'ny tranonkala hafa. (Ilaina ny ambiny handoavana ny fianaran'ny zanako lahy amin'ny oniversite!).
Mahaliana amin'izao andro iainantsika izao fa mbola fantatry ny olona ny dikan'ny hoe «olombelona». Afaka nandefa ny bokiny tamiko tamin'ny alàlan'ny Amazon i Jack, ary ny CVS sy ny Wikimedia dia afaka nandefa mailaka mora foana ho ahy misaotra ahy. Mpisolo vava lehibe amin'ny mailaka aho… Tiako ny azo anaovana azy manokana sy mandeha ho azy. Izany dia nitaky ezaka kely kokoa ary azo antoka fa nandany vola kely kokoa. Izany dia milaza amiko fa nihevitra ireto olona ireto fa manan-danja amin'ny orinasany aho fa mendrika ny hampiasa vola amiko. Hafatra mafonja izany, sa tsy izany?
Izany no karazana mailaka mivantana izay mandeha. Ireo faritany mailaka an'arivony an'arivony azoko eto dia tsy mendrika hotononina. Nilaza tamin'ny mpanjifa aho taloha fa ny fotoana tokony hisarihana ny sain'ny olona amin'ny alàlan'ny mailaka mivantana dia ny fotoana handehanan'izy ireo mandeha amin'ny boaty mailaka mankany amin'ny fitoeram-pako. Tsy niova hevitra mihitsy aho tamin'izay. Ny fandefasana fonosana tanana na karatra fisaorana dia tena nahasarika ny saiko!
Tags: mail mivantanamarketing mivantanavarotra nentim-paharazana
Tompony ny sehatra misy anao!
Apple Mandefa… Telefaona iray. Misy olona hafa mangozohozo?
Jan 9, 2007 ao amin'ny 9: 29 AM
Definately. Tianay ny fikasan'ny olombelona - tsy izany koa ve no iray amin'ireo antony nahatonga ny bilaogy lasa lehibe tokoa?
Ny ray aman-dreninay taloha dia nifampiresaka tamin'ny alàlan'ny taratasy fitiavana. SMS haingana izao. Tsy dia mitovy, eh?
Jan 9, 2007 ao amin'ny 10: 57 AM
> Ny fahendren'ny kisoa manidina. Heveriko fa io no fanomezana voalohany? amin'ny maha-bilaogera!
Douglas mitandrina - tsy fantatrao ve fa ny fandraisana fanomezana dia mety hitarika amin'ny famotopotorana ny etikao 🙂 LOL
> Matetika aho maka ny volan'ny Paypal ary mamerina azy ireo amin'ireo mpamorona plugin sy tranokala mangataka fanomezana - raha ilaina ny rindrambaiko na ny serivisiny.
Nanomboka nanao izany koa aho tamin'ny faran'ny taona lasa. Fihetseham-po tsara ny afaka mandray anjara miverina amin'ireo manome ny fotoanany hanao zavatra ampiasaintsika isan'andro.
Jan 9, 2007 ao amin'ny 11: 18 AM
Fantatray ve fa niasa ireto mailaka mivantana ireto satria nampiroborobo ny varotra ireo orinasa nandefa ny fampielezana mailaka mivantana taminao?
9 Jan 2007 amin'ny 4:51 PM
Ity misy fampandrenesana ho an'ny mpanao dokam-barotra rehetra, mora aho, mora ary marina. Azonao atao ny mividy ahy, fa ampahafantariko ny olon-drehetra fa novidina aho. 🙂
Miombon-kevitra aminao amin'ny Paypal aho. Manantena aho fa io dia fironana mitohy. Ny loharano misokatra dia tsara ho antsika rehetra!
9 Jan 2007 amin'ny 4:54 PM
Amin'ny maha-marketer database azy dia sarotra ny manisa an'io karazana fandaniana io, sa tsy izany? Satria tsy mahay mandrefy zavatra iray ianao dia tsy midika hoe hevitra tsara izany. Ireo orinasa izay 'manao ny tsara' dia manomboka mandroso tokoa. Mino marina tokoa aho indray andro any fa hanana index 'tombony ho an'ny fiaraha-monina' ho an'ny orinasa isika indray andro any mba hiarahan'ny olona miasa amin'ireo orinasa manao soa bebe kokoa ho an'ny firenena fa tsy ratsy.
Farafaharatsiny mba antenaiko!
9 Jan 2007 amin'ny 10:52 PM
Tsy isalasalana fa tsara ny manao ny tsara. Ary izaho no olona voalohany afaka ao aorian'ny orinasa manao zavatra mahafinaritra. Ny fandaniana fotoana hanaovana ireo hetsika ireo dia mitondra ROI tsara kokoa noho ny fandaniana vola amin'ny dokambarotra amin'ny fahitalavitra.
Taona maro lasa izay, nipetraka tao amin'ny efitrano iray niaraka tamin'ny olona avy any Hallmark aho. Tian'izy ireo ny hamorona programa misaotra mandeha ho azy ho an'ny orinasako, mifamatotra amin'ny rafitra CRM. Amiko dia nifanohitra tamin'izay no anoloranao tena izany. Misy tsipika tsara toy izany eo amin'ny fanaovana soa, ny fanaovana zavatra toa tsara ary ny fiezahana hitondra tombony. Raha ny hevitrao, raha manao soa ianao, dia hanaraka ny varotra sy ny tombom-barotra.
10 Jan 2007 amin'ny 9:47 PM
Heveriko fa mitombina tokoa ny hevitrao momba ny “fikasihan'olombelona”.
Tsikaritray fa ny mailaka fanaovana pirinty kopia mafy sy fitaovana ho an'ny fampiroboroboana
ny orinasanay dia nandoa be dia be. Tsy maninona ny mailaka, fa manjary lasa
tsy dia atokisana. Spam sy junk be loatra. Lasa manelingelina.
Mail mivantana; na izany aza, manohy manakatona ny varotra, ary araka ny nambaranao "ny olombelona
mikasika ”dia miseho manampy hahamarika.
Hitanay fa ny fampifangaroana ny fisian'ny Internet miaraka amina fampielezan-kevitra mivantana mivantana
miasa tsara indrindra ho an'ireo orinasa katalaogy soloinay. Misy sanda lehibe
amin'ny marketing misy fantsona marobe. Tsy afaka miankina amin'ny fiara marketing iray intsony ny orinasa iray.
Tena tiako ny lahatsoratrao… manana mpamaky mazoto vaovao ato amiko ianao!
antsoy ary ny tena "paositra" dia manaporofo hatrany